Vaovao - Inona no atao hoe Furfural?
Furfural dia simika vita amin'ny zavatra biolojika izay novokarina ho an'ny tanjona indostrialy. Izy io dia voaforon'ny vokatra azo avy amin'ny fambolena toy ny hodi-kazo, volom-boankazo, kitapom-bary, ary valala. Ny sasany amin'ireo vokatra ampiasana azy dia misy mpamono ahidratsy, famonoana fungisida ary solvent. Izy io koa dia singa mahazatra amin'ny famokarana solika fitaterana sy amin'ny dingan'ny fanadiovana menaka fanosorana. Ny simika dia singa iray amin'ny famokarana mpandraharaha indostrialy maro hafa koa.
urfural dia simika vita amin'ny zavatra biolojika izay novokarina ho an'ny tanjona indostrialy.
Rehefa novokarina be dia be, ny akora simika dia natao tamin'ny alàlan'ny fametrahana polysaccharides pentosan amin'ny alàlan'ny fizotran'ny hydrolysis asidra, midika izany fa ny selulose sy ny mosary avy amin'ny akora fototra dia navadika ho siramamy tamin'ny fampiasana asidra. Ao anaty kaontenera misy rivotra, ny visfural dia viscous, tsy misy loko ary misy menaka ary manana fofona toa amandy. Ny famoahana ny rivotra dia mety mandoko ilay ranoka amin'ny alokaloka manomboka amin'ny mavo ka hatramin'ny volontany.
Ny Furfural dia mety levona amin'ny rano ary mety levona tanteraka amin'ny ether sy etanol. Ho fanampin'ny fampiasana azy ho simika mitokana dia ampiasaina amin'ny famokarana simika toy ny furan, furfuyl, nitrofurans, ary methylfuran. Ireo akora simika ireo dia ampiasaina amin'ny famokarana bebe kokoa ny vokatra, ao anatin'izany ny akora simika fambolena, fanafody, ary stabilisatera.
Misy fomba maro ifandraisan'ny olombelona amin'ny volon'olombelona. Ankoatry ny fihenan'ny akora simika mandritra ny fanodinana azy, dia hita voajanahary amin'ny karazana sakafo maromaro izy io. Ny famoahana maivana an'io natiora io dia tsy voaporofo fa manimba.
Ny fanefana mavesatra ny volom-borona dia mety hanapoizina. Nandritra ny fitsapana natao tamin'ny laboratoara momba ny olona sy ny biby, dia hita fa manelingelina ny hoditra, ny fonosan'ny moka ary ny maso ny fery. Voalaza koa fa niteraka tsy fahazoana aina amin'ny tenda sy ny lalan-pisefoana io. Ny sasany nitatitra ny vokatry ny fitrangan'ny akora simika amin'ny fotoana fohy ao amin'ny faritra misy rivotra tsy dia tsara ao anatin'izany ny fahasarotana amin'ny fisefoana, ny lela moana ary ny tsy fahafantarana ny tsirony. Ny voka-dratsy maharitra mety aterak'ity karazana fampandrenesana ity dia mety miainga amin'ny toe-javatra misy ny hoditra toy ny eczema ary ny fanalefahana sary amin'ny olan'ny fahitana sy ny edema amin'ny havokavoka.
Nanjary niely be ny Furfural tamin'ny 1922 rehefa nanomboka namokatra azy tamin'ny vatan'ny oat ny orinasa Quaker Oats Company. Ny oats dia mitohy ho iray amin'ireo fomba malaza indrindra amin'ny fanaovana ny simika. Talohan'izay dia nampiasaina tamin'ny menaka manitra sasany fotsiny izy io. Io no novolavola voalohany tamin'ny 1832 an'i Johann Wolfgang Döbereiner, mpahay simia alemanina izay nampiasa fatin'ahitra mba hamoronana asidra formika, izay vokarin'ny volom-borona. Inoana fa mahomby amin'ny famoronana ny simika ireo vitsika satria ny vatany dia misy ny karazan-javamaniry ampiasaina hanodinana azy.